ရီးရဲလ်မှထွက်ခွာလာတဲ့ ဂါရတ်ဘေးလ် နှင့် အစ္စကို ပရီးမီးယားလိဂ်မှ ခေါ်ယူမလားဆိုတဲ့လေလှိုင်းအသံများ... - YTV Channel
Home | Sports | ရီးရဲလ်မှထွက်ခွာလာတဲ့ ဂါရတ်ဘေးလ် နှင့် အစ္စကို ပရီးမီးယားလိဂ်မှ ခေါ်ယူမလားဆိုတဲ့လေလှိုင်းအသံများ…
ရီးရဲလ်မှထွက်ခွာလာတဲ့ ဂါရတ်ဘေးလ် နှင့် အစ္စကို ပရီးမီးယားလိဂ်မှ ခေါ်ယူမလားဆိုတဲ့လေလှိုင်းအသံများ…
လက်ရှိချန်ပီယံလိဂ်ဖလားကို ရယူပေးထားနိုင်ခဲ့တဲ့ ရီးရဲလ်အသင်းမှ တောင်ပံကစားသမားနှစ်ယောက်ဟာ ယခုနှစ်နွေရာသီမှာ အသင်းမှထွက်ခွာမယ်လို့သိရပါတယ်...အဆိုပါကစားသမားတွေကတော့ဂါရတ်ဘေးလ် နှင့် အစ္စကို တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်....
အဆိုပါကစားသမားနှစ်ယောက်ဟာ နည်းပြကြီးအန်ချလော့တီ လက်ထက်မှာ ပွဲထွက်ခွင့်နည်းပါးပြီး တစ်ရာသီလုံးမှာ ဂိုးရရှိမှုပါ ဆုံးရှုံးထားရတဲ့ကစားသမားတွေဖြစ်ပါတယ်....
အဆိုပါကစားသမားတွေဟာ ၂၀၁၃ ခုနှစ် လောက်ထဲက ရီးရဲလ်မက်ဒရစ် ကစားသမားအဖြစ် ရောက်ရှိလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီး နည်းပြကြီးဇီဒန်း လက်ထက်မှာ အားကိုးအားထားပြုရတဲ့ တောင်ပံနှစ်စုံအဖြစ် လျှမ်းလျှမ်းတောက်ခဲ့ကြပါတယ်....ရီးရဲလ်တောင်ပံနှစ်ဖက်ကို ၉ နှစ်တာ အသုံးတော်ခံခဲ့ပြီးနောက် နည်းပြ အန်ချလော့တီ လက်ထက်မှာတော့ ပွဲထွက်ခွင့်နည်းလာခဲ့ပြီး ဒဏ်ရာပြဿနာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရချိန်များနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်...
၂၀၂၂ ခုနှစ် ချန်ပီယံလိဂ် ဗိုလ်လုပွဲအပြီးမှာတော့ ဂါရတ်ဘေးလ်နဲ့ အစ္စကိုတို့ အသင်းကထွက်ခွာဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်....
အစ္စကိုကတော့ ထွက်ခွာသွားခဲ့ပြီလို့သတင်းတော်တော်များများကဖော်ပြထားကြပြီး သူ့ကိုကမ်းလှမ်းမယ့် အသင်းကိုစောင့်မျှော်နေတယ်လို့အကြမ်းဖျင်း သိရှိထားရပါတယ်...ဂါရတ်ဘေးလ် အနေနဲ့လဲ ထွက်ခွာခွင့် ရရှိထားပြီး ပရီးမီးယားလိဂ် ကလပ်တော်တော်များများရဲ့ ကမ်းလှမ်းမှုကိုရရှိထားတယ်လို့ အာတီအယ် သတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်....
ယခုနှစ်မှာပရိသတ်ကြီးတို့အနေနဲ့ကရော ဂါရတ်ဘေးလ် ကို ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ ဘယ်အသင်းမှာ တွေ့ချင်လဲဆိုတာလေးကို ကွန့်မန့်လေးမှာ ဖော်ပြပေးခဲ့ပါအုံးနော်.....
မိုနာကိုအသင်းဆီကို ပြောင်းပြီး အနာဂတ်တစ်ဖန် ပြန်လည်တောက်ပတော့မယ့် လီဗာပူးလ်တိုက်စစ် ကစားသမားလေး…. June 29, 2022
လူမဝယ်လို့ ဆန္ဒပြတော့မယ့် ပရိသတ်များနှင့် အပြောင်းအရွှေ့ဈေးကွက်မှာ အရှိန်ကောင်းလာတဲ့ မန်ယူ…. June 29, 2022
မထင်မှတ်ထားတဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ကစားသမားတို့ရဲ့ ထိပ်သီး (၁၀) ယောက် ပြောင်းရွှေ့ကြေးများ…. June 27, 2022
ဘရာဇီးလ် တိုက်စစ်အတွဲကို မြင်တွေ့ရဖို့ နီးစပ်လာပြီဖြစ်တဲ့ အာဆင်နယ်…… June 27, 2022
.ချယ်လ်ဆီးရဲ့ သွက်လက်တဲ့ လူဝယ်မှုနှင့် ရောက်ရှိလာနိုင်တဲ့ ကစားသမားလေးများ… June 27, 2022
Start from 14 January,2019, we have trial broadcasted and we will mainly broadcast Entertainment, Business, Information and Education Program at YTV.
09 4577 41 075, 09 4577 41 339
Copyright © 2021 My Multimedia Company Limited. All Rights Reserved.
Request Y Music